Iimveliso zeBhafu, isicoci sesandla, iKhandlela leSoy-Haida
Sisenza iimveliso zokuhlambela, iseti yesipho sokuhlambela, ibhombu yokuhlambela, isepha yesandla, isepha yesandla egwetyiweyo, isicoci sesandla, i-lotion, ishampu, i-conditioner, ikhandlela lesoya, isepha, imaski, iparfum, i-diffuser yasekhaya, isithunzi samehlo, i-lip balm, i-lipstick. , ukosula okumanzi, izithambiso kunye nokunye.
Umzi-mveliso wethu wasekwa ngo-1994 uneminyaka engaphezulu kwe-27 yamava atyebileyo kwaye uhlolwe yi-BSCI, kwaye uphumelele uhlolo lwe-BV, SGS kunye ne-Intertek, kwaye sikwadibana nemigangatho yaseYurophu kunye ne-US.
Ukuza kuthi ga ngoku, sithenjwa ngabathengi abakhulu kwihlabathi liphela kwaye baphumelele uhlolo lwabo lwefektri, njenge-Kmart, iWal-mart, iWastons, iDisney, iThagethi, iCostco njl njl. Iinkonzo ze-OEM & ODM ziyafumaneka.
Ibhaskithi yokuhlambela ye-spa, iSeti yeBhafu yabasetyhini kunye naMadoda, ibandakanya iGel ye-Shower, ibhafu yokuhlambela, ityuwa yokuhlambela, i-sponge yokuhlambela, iBhokisi yesipho egqibeleleyo yoSuku lukaMama, umhla wokuzalwa, uMtshato, ubusi kunye ne-Almond 8pcs.
Ihowuliseyili ireyibhile entle yokuthambisa inkathalo yomzimba spa ibhaskithi yeplanga kunye nesipho somzimba eseti yabasetyhini & namantombazana iOEM & ODM.
Yintoni izinto zangasese?
Izinto zangasese ziimveliso eziyimfuneko kukhathalelo lwekhaya lwemihla ngemihla, kubandakanya ishampu, ijeli yeshawa, izixhobo zezandla...
Yenziwe ngantoni ilipstick
Nokuba kukudala okanye ngoku, imfuno yabasetyhini yobuhle ayizange ime, kwaye i-lipstick rouge...